Ny webcomic an'i Strange Planet dia ho tonga amin'ny Apple TV + ho andiany mihetsika | Avy amin'ny mac aho
Heveriko fa ity dia iray amin'ireo atiny tsy hita tamin'ny Apple TV +. Valan-javaboary mitahiry. Andian-tsarimiaina tantara an-tsary ao anaty drafitra tantara an-tsary. Efa nanana sary toa an'i Charlie Brown izahay fa tsy tamin'ny fomban'ny Planet hafahafa. Webcomic iray mifototra amin'ny tantaran'olon-kafa manga izay ho sakaizantsika tsy ho ela miaraka amin'ny eritreriny manan-tsaina hamahana ny asa isan'andro. Mazava ho azy, tsy maintsy zatra ny fiteny somary mampiavaka azy isika.
Apple TV + dia nanomboka fampifanarahana mivantana tamin'ny andiany "Strange Planet" miaraka amin'i Dan Harmon sy Nathan Pyle izay mpamokatra mpanatanteraka. Ny webcomic "Strange Planet" dia misy vahiny vahiny be fitiavana sy sariaka izay manao asa andavanandro, fa milazalaza amin'ny fiteny hafahafa. Nathan Pyle, mpamorona ny webcomic, ary Dan Harmon, mpiara-namorona ny "Rick sy Morty," no mpanatanteraka ny fampisehoana. Araka ny fe-potoana farany, ny andiany dia novokarin'ny Apple Studios sy ny studio sary mihetsika ShadowMachine, izay tompon'andraikitra tamin'ny "Bojack Horseman." Tsy misy antsipiriany misimisy momba ilay andiany nozaraina. Hihaino tsara ny fomba hitrangan'izany isika.
Nathan Pyle dia nanangona mpanaraka an-tapitrisany tao amin'ny Instagram tamin'ny webcomic, izay nanomboka tamin'ny taona 2019, ary namoaka boky maromaro. Tena mahomby indrindra ny tantara an-tsary sy ny boky "Strange Planet" noho ny fomba fahitan'ireto vahiny manga ireto ny fiainana. Miavaka ny fehezanteny sy ny fihetsika nataony.
Raha vantany vao fantatray ny daty namoahana na vaovao hafa momba ity andiany vaovao ity ao amin'ny Apple TV + dia hampahafantarinay anao. Amin'izao fotoana izao hahazoana tsiro amin'ity lohahevitra ity dia tokony ho fantatrao fa ny vanim-potoana faharoa an'ny Central Park dia hanomboka amin'ny premiere. Toy ny mahazatra, ny kalitao mifanohitra amin'ny habetsahana fa mihamaro hatrany ireo farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Webcomic hafahafa Planet tonga amin'ny Apple TV + ho andiany mihetsika
Opera dia manavao ny browser-n'ny Mac amin'ny alàlan'ny antso an-tsarimihetsika ary vaovao maro hafa